Alan Shearer: “Manchester City Ma Noqon Doonto Koox Weyn Marka Laga Reebo Hal Xaalad” – Gool FM
Alan Shearer: “Manchester City Ma Noqon Doonto Koox Weyn Marka Laga Reebo Hal Xaalad”
(Man City) 14 Maajo 2018. Halyaygii hore xulka qaranka England iyio kooxaha Newcastle United, Blackburn Rovers iyo Southampton Alan Shearer ayaa wuxuu sheegay in Manchester City oo xili ciyaareedkan ku guuleesatay Premier League aysan wali ahayn koox weyn iyadoo uu hogaaminayo Pep Guardiola hadii aysan mar kale ku guuleysan horyaalka.
Manchester City ayaa loo caleemo saaray horyaalka xilli ciyaareedkii 2017-2018 kadib markii ay ku qaaday 100 dhibcood iyadoo uu hogaaminayo Pep Guardiola.
Alan Shearer ayaa u sheegay shabakada “BBC Sport” ee dalka England: “Manchester City waa kooxda kaliya ee u qalantay in ay ku guuleysato Premier League xilli ciyaareedkan, waxay sameeyeen xilli ciyaareed weyn, lakiin kooxdu waa inay ku guuleysato horyaalka xilli ciyaareedka soo socda”.
“Manchester City xili ciyaareedkan waxay u muuqdeen sida iyagoo ku war galiyay kooxaha kale ee kula tartamayay Premier League, in ay soo qabtaan hadii ay awoodaan”.
Alan Shearer ayaa si weyn kaga naxay isbuucii ugu dambeeyay ee horyaalka Premier League, kadib markii uu Mohamed Salah dhaafay rikoodhkii taariikhiga ahaa ee gooldhaliyaha ugu sareeya ee hal xili ciyaaree.
Kooxda Man City oo hoggaaminaysa liiska kooxaha 100-dhibcood ku qaaday horyaallada Waddankooda